महानायक अमिर दोङलाई सर्बोत्कृष्ट नायकको जाम्बुलिङ ईन्टरनेशनल अवार्ड | Ujyaalonetwork.com
महानायक अमिर दोङलाई सर्बोत्कृष्ट नायकको जाम्बुलिङ ईन्टरनेशनल अवार्ड
भाद्र २४,काठमाण्डौ । तामाङ समुदायका महानायक अमिर दोङलाई सर्बोत्कृष्ट नायकको जाम्बुलिङ ईन्टरनेशनल अवार्ड प्रदान गरिएको छ । दर्जनौ हिट फिल्ममा अभिनय गरिसकेका उनले देन्बा माया चलचित्र बाट सर्बोत्कृष्ट नायकको अवार्ड थापेका हुन ।
समुदायमा उनलाई महानायकको रुपमा चर्चा बढ्दै गर्दा अझ उनलाई सबैले स्थापित कलाकार र लोकप्रिय नायकको रुपमा चर्चा पाउदै आएको छ । “दर्शकको मायाले नै मलाई यहाँसम्म यो स्थानसम पुर्‍याउनु भएको छ । अझ तामाङ चलचित्र राम्रो बनाउने उत्साह र जिम्मेवारि थपेको महशुस छ । “महानायक दोङ्ले बताए ।
चाणक्य भन्छन्- जवान महिलाले कहिल्यै भुल्नुहुँदैन यी ६ कुरा
नेपाली यू–१८ राष्ट्रिय फुटबल टोली आज पोखरा प्रस्थान
किन विफल हुँदै छ अंगीकृत नागरिकता विधेयक ?
क्यान्सर नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ ? यसो भन्छन् विज्ञहरु
हराएकी बालिका २ दिनपछी फेला
‘कान्छी नेपाल’ सुनसान
‘नेपाल आइडल’ सिजन ३ को अडिसन घोषणा,यसरी सहभागी हुन सकिन्छ
वाइबाका ४ गजल,बेचियो जवानी खाडीमा
नेपालमा उत्तर कोरियाली लगानीमा प्रतिबन्ध, व्यवसाय बन्द गर्न एक महिने अल्टिमेटम
‘पाकिस्तान र नेपाल मैंत्री व्यापार मेला’ काठमाडौंमा सुरु
पक्राउ परेका ९ पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न पत्रकार महासंघको माग
सीके राउतलाई सांसद बनाउन पहल
अभियान थालेको ११ बर्षमा ७७ मध्ये ५१ मात्रै पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा,निरक्षरता उन्मूलन भएन
बलात्कारको घटनामा गाउँमै ‘क्षतिपूर्ति’ दिलाएर मिलापत्र
कम्युनिस्ट सरकारले अबको ५० वर्ष नेतृत्व गर्ने प्रचण्डको दावी